जुन १४ तारिखमा दमाम र रियाद बाट एकएक उडान हुँदै, टिकटको लागी कंहा सम्पर्क गर्ने?? – jagritikhabar.com
जुन १४ तारिखमा दमाम र रियाद बाट एकएक उडान हुँदै, टिकटको लागी कंहा सम्पर्क गर्ने??
कोरोना माहामारीको दोश्रो लहर फैलिए संगै गत वैशाख २० गतेदेखि नेपालमा व्यवसायिक अन्तरराष्ट्रिय उडान ठप्प छन् ! सरकारले भर्खरै मात्र कतार, टर्की र चाईनामा हप्ताको एकएक उडान गर्न अनुमति दिएको छ! सरकारले उडान बन्द गरेपछि रोजगारी तथा व्यापार व्यवसायको क्रममा विभिन्न देशहरुमा रहेका नेपालीहरु चर्को समस्यामा परेका छन् ! विशेष गरि छुट्टी वा रोजगारी छोडेर स्वदेश फर्कन टिकट काटेर बसेका नेपालीहरु समस्यामा छन् ! काम छोडेर कम्पनी बाट हरहिसाब बुझिसकेपछि उडान बन्दका कारण स्वदेश फर्कन नसकेका नेपालीको पिडा शब्दमा बयान नै गर्न नसकिने खालको छ !
यसैबीच साउदीको दमाम बाट आगामी जुन १४ तारिख हिमालय एअरलाइन्सले उडान भर्न लागेको समाचार बाहिरिएको छ! एअरलाइन्सले जुन १४ तारीख साउदी अरबको दमाम शहरबाट काठमाडौंका लागि उडान भर्न लागेको साउदीका लागी हिमालय एयरलाइन्सका कन्ट्री मेनेजर सुवास तिमिल्सिनाले जानकारी दिए! उडान बारे थप जानकारी दिंदै तिमिल्सिनाले व्हाट्सप ग्रुप बनाएर टिकटका बारेमा पुर्ण जानकारी दिने बताए । उनले टिकटदरका लागि हल्लाभन्दा पनि आधिकारिक जानकारी लिन समेत अनुरोध गरेका छन् । व्हाट्सप ग्रुपमा वा हिमालयको दमाम काउन्टरमा टिकटदरका बारेमा जानकारी लिनसक्ने मेनेजर तिमिल्सिनाको भनाइ छ ।
त्यसैगरी (Geoland travels ) का प्रतिनिधि सुरेशराज त्रिपाठीले समेत साउदीका विभिन्न शहरबाट हिमालय एयरलाइन्सका दमाम-काठमाडौं उडानका लागि बसको व्यवस्थापन गर्नेगरी १४ जुनको टिकट लिन अनुरोध गरेका छन् । प्रतिनिधि त्रिपाठीका अनुसार दमाम-काठमाडौंका लागि धमाधम टिकट बिक्री भइरहेका छन् । उनले आफ्ना रियाद र दमाममा रहेका ट्राभल्सबाट टिकट लिन अनुरोध गरेका छन् ।
यता, प्रवास खबर अनलाईनले भने साउदीको दमाम र रियाद बाट पनि १४ तारिख उडान हुने भनेर समाचार लेखेको छ! प्रवास खबरका अनुसार १४ तारिख रियाद बाट नेपाल एअरलाइन्सले पनि उडान भर्ने छ ! साउदीका लागि निवर्तमान नेपाली राजदूत महेन्द्रप्रसाद सिंह राजपुतलाई उद्दृत गर्दै प्रवास खबर लेख्छ, ” ‘मलाई आज यहाँ रहेका दुबै एयरलाइन्सका कन्ट्री डाइरेक्टरले १४ जुनमा उडान तय भएको जानकारी गराउनु भएको थियो । सोही उडानमा मलाई पनि फर्किन उहाँहरुले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। तर, म आजै राती दोहा हुँदै काठमाडौँ आउन लागेको छु भनेर जानकारी दिए।’ राजपुत आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर आज नेपाल फर्किदै छन्। कोरोना महामारीका कारण केही दिनअघि उनको कार्यकाल पूरा भएपनि उतै अड्किएका थिए । उनी कतारको दोहा हुँदै नेपाल फर्किन लागेका हुन्।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोख्रेलले भने साउदीको उडान सूचारुबारे आफूलाई जानकारी प्राप्त नभएको बताउँछन्। ‘उहाँहरु (एयरलाइन्सका साउदी प्रतिनिधि) तयारी गर्दै हुनुहुन्छ होला, यसबारेमा हामीलाई अहिलेसम्म जानकारी छैन्!